Vanhu Vakawanda Vobatwa neZvirwere Zvesiki neZvimwe
Bazi rezvehutano rinoti kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde hwadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana, mukati memakore gumi nemashanu apfuura, zvirwere izvi zvichakawanda munyika uye zviri kunyanyobata vanhu vane makore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe.
Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi, munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi, kukomimiti yeparamende inoona nezvehutano, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvehutano, Dr John Mangwiro, vati munyika mune zvirwere zvapabonde zvakawanda zvakaita seGonorrhea neSyphlis neHIV.
Vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi hwakadzikiria zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu nehutachiwana hweHIV/AIDS.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvepaponde mubazi iri, Dr Tsitsi Appolo, vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands neMashonaland West.
Vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda.
Dr Appollo vanoti humbowo hunoratidza kuti munhu mumwe chete pa vanhu vashanu anenge aine chimwe chirwere chapabonde anenge aine hutachiwana hweHIV/AIDS.
Vatiwo zvakaonekwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezviwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi.
Vati mekuda kwaizvo vari kuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakakwanda nechirwre ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here, kuvakurudzira kushandisa makondomu pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere.
Vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde, vachairi vemotakari hombe kana kumagonyeti, vanorarama nekutengesa bonde, varume vanorara nevamwe varume pamwe nevanofamba muzvimbodzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maArtisinal miners.
Dr Appollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondomu munzvimbo zhinji munyika muna 2018, 2019 pamwe negore rino izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde.
Vati bazi ravo rine hurongwa hwekurapa zvirwere zvakaita seSyphilis, pamwe nekuti vana vasatapurirwe hutachiwana hweHIV nanamai vavo.
Vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepadone aakenda kuchipatara kana kirinika anobva aongororwa kuti haana hutachiwana hweHIV here.
Asi vati pari zvino nyika haina mishonga yakakwana yekurapa maSTIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapihwa mari inokwana kutenga mishonga iyi.
Munyori anoona nezvehutano muMDC Alliance, Dr Henry Madzorera, vaudza Studio7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzehutano pamwe nekugadzira hupfumi kuti vanhu vawane mabasa vaswera vachikorokoza.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuitira kuti vange vaine zvirwere varapwe.
Dr Mangwiro vati pane mimwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera here kuti varambe vachiishandisa.